Amathiphu ayi-10 Wokwakha Iwebhusayithi Ethengisa Izakhiwo Eqhuba Abathengi Nabathengisi Abangahle Bazibandakanye | Martech Zone
Ukuthenga ibhilidi, ikhaya noma i-condo kungukutshalwa kwemali okubalulekile… futhi kuvame ukwenzeka kanye kuphela empilweni. Izinqumo zokuthenga izindlu nezindlu zishukunyiswa yimizwa eminingi ephikisanayo kwesinye isikhathi - ngakho-ke kuningi okudinga ukucatshangelwa lapho kusungulwa i iwebhusayithi ye-real estate lokho kuyabasiza ohambweni lokuthenga.
Indima yakho, njenge-ejenti noma umthengisi wezezakhiwo, ukuqonda imizwa ngenkathi uyiqondisa ekwenzeni ukukhetha okunengqondo nokwazi. Nawa amathiphu ayisithupha woku yakha futhi uthuthukise iwebhusayithi yakho lokho kuzokusiza ekubeni ngumholi wedijithali ekuthengisweni kwezezakhiwo.
Ithiphu 1: Hlanganisa ukusesha kwangaphakathi namandla wokuhlunga
Lapho ithemba lakho lithenga izindawo ezithengiswayo, zihlala zinemigomo ethile engqondweni. Lapho nje isivakashi sifika kusayithi lakho, bakhombise ukuthi ungakhomba izidingo zabo bese wethula izakhiwo ezihambelana nalokho abakufunayo.
Faka ukubekwa okusobala kwenkambu yosesho lwangaphakathi ngezihlungi ezizokuvumela ukuthi uhlukanise izakhiwo zakho zempahla. Uma imisebenzi yakho igxile ekuthengeni kwasekhaya, isibonelo, faka inani, uhlobo lwesakhiwo, imidwebo eyisikwele, usayizi wesamba, inani lamakamelo okulala, inani lamakamelo okugeza, nezinye izici (iziko, iphuli, igaraji, njll.
Uma uhlu lwakho lubandakanya izifunda eziningi, izinhlobo zomhlaba, nezitayela zezakhiwo, ungafisa ukwandisa amakhono wokuhlunga ukuze abathengi bakho banciphise ukusesha kwabo ezindaweni ezithile nakwezinye izici zempahla.
Ithiphu 2: Nikela Ikhasi Esifundeni ngasinye
Ukukhethwa kwendawo kubalulekile uma kuziwa ekuthengeni indawo. Nikezela ikhasi esifundeni ngasinye, endaweni yangakini, noma esifundeni sesikole lapho unikela khona ukuthengisa noma ukuqasha izindlu nomhlaba. Faka imininingwane esebenzayo nebalulekile ukuze wazi mayelana nesifunda. Futhi njalo faka imephu ekhombisa ngokunembile impahla yakho ngayinye kanye nezinye izindawo onentshisekelo kuzo:
Izinsizakalo eziseduze (izikole, izitolo, imitholampilo, izibhedlela, amasonto)
Izindawo zokuzijabulisa (amapaki, amachibi okubhukuda, izindawo zegalufu)
Izikhangibavakashi ezindaweni eziseduze
Xhumana njalo nendlela yokuphila etholakala endaweni. Ingabe indawo ethule nephephile, elungele imindeni esencane, noma kunalokho indawo yangakubo eseduze nezindawo zokudlela ezihamba phambili, amabhayisikobho, namahholo okusebenza? Ngaphezu kokwazisa izivakashi zakho ngezindawo abangeke bazazi, lawa makhasi azothuthukisa ukukhonjiswa kwekhasi lakho kusesho oluthile.
Ithiphu 3: Nikeza Yonke Imininingwane Yesakhiwo ngasinye
Umthengi wanamuhla online akafuni ukubiza umthengisi wezezakhiwo noma umthengisi ukuze athole imininingwane ebalulekile. Qiniseka ukuthi amakhasi anemininingwane yezakhiwo noma amayunithi wakho aqukethe imininingwane elandelayo:
Inani lamakamelo, kufaka phakathi amakamelo okulala namakamelo okugeza
Imidwebo eyisikwele, indawo yokuhlala, nezindawo zamakamelo (imethrikhi neyombuso)
Izinhlelo zikagesi, zokushisa, nezamanzi
Izindawo zokuhlala ezingaphandle (imipheme, amadokodo, njll.)
Izindawo ezivamile nezinsizakalo ezinikezwayo (esimweni samakhondomu)
Ifenisha noma izinto zikagesi ezizofakwa
Unyaka wokwakhiwa noma ukuthuthuka okwenziwe ngokuhamba kwesikhathi
Amathuba okulungiswa okusha (isb. Ukulungisa kabusha isitezi)
Futhi-ke, faka izithombe ezimangalisayo zazo zonke izici zempahla, ngaphandle kwekhaya kuzo zonke izinhlangothi, izithombe zamakamelo onke, kanye nemidwebo ye-drone yempahla. Uma isithombe sizuzisa amagama ayinkulungwane, cabanga ukuthi zinkulu kangakanani imiphumela inqwaba yezithombe ezinhle ezoba nayo! Awudingi ukuqasha umthwebuli wezithombe oqeqeshiwe… ama-smartphones anamuhla anamakhono amangalisayo kulezi zinsuku. Nge-engeli elifanele nokukhanyisa, ungaba nezithombe ezinhle kakhulu ezithwebula yonke imininingwane yempahla.
Ithiphu 4: Nikeza ngezindlela zokwabelana ngempahla
Abathengi bempahla yanamuhla abavamile ukuthenga bodwa, ngakho-ke banikeze izinketho eziningi zokwabelana nge-imeyili, imithombo yezokuxhumana, noma ngomyalezo wombhalo. Ungahle ufise ukunikela ngefomu elithi “Thumela kumngani noma osebenza naye” elithatha ikheli labo le-imeyili nohlu lwabo abanentshisekelo - qaphela nje ukusetha okulindelwe kokuthi uzoxhumana nabo noma cha.
Futhi qiniseka ukwenza noma yiziphi izixhumanisi zilandeleke ukuze ukwazi ukuqonda ukuthi iziphi izinsizakalo zemithombo yezokuxhumana ezishayela amasheya amaningi nokuvakashela impahla yakho.
Ithiphu 5: Yenza ukuxhumana nawe kube lula, kwenziwe kube ngokwakho, futhi kungabi nengcindezi
Njengoba abathengi bevame ukungabaza ukufinyelela abenzeli nabathengisi, uzofuna ukubenza bakhululeke kakhudlwana. Ngenkathi ufaka amagama nezinombolo zocingo ze-ejenti yakho, qiniseka ukufaka isithombe kanye nomlayezo owenzelwe wena uqobo ukuthi ukubuza kwabo ngeke kube nengcindezi.
Qiniseka ukufaka ifomu ekhasini ngalinye lesakhiwo kanye nemininingwane yendawo ensimini efihliwe. Ngale ndlela, lapho ufinyelela kubo, ungacwaninga impahla bese ulungele ingxoxo!
Ithiphu 6: Thatha ama-Analytics futhi ulandelele imininingwane yakho yezivakashi
Noma ngabe ungumdlali omncane noma omkhulu emkhakheni wezezakhiwo, ngokungangabazeki uzozuza ngokuqoqa imininingwane mayelana nezivakashi zakho. Le ngxenye yecebo lakho lokumaketha ingathatha ukubaluleka okuguqukayo, kuya ngesabelomali kanye nabasebenzi onabo. Amathuluzi amaningi okuhola angasiza kakhulu kulesi sigaba.
Amafomu Wokuthwebula Wokuhola
Qala ukuqoqa imininingwane mayelana nezivakashi zakho ngokubakholisa ukuthi ukuhlinzeka ngekheli labo le-imeyili kuzoba wusizo ekufuneni kwabo izindlu nomhlaba. Nazi izibonelo ezimbalwa zamasu asebenzayo wokuthwebula imininingwane yethemba embonini yezezakhiwo:
Izindlu ezivulekile namathuba wokuvakasha kwangasese
Imincintiswano noma ukukhushulwa
Uhlu lwe-VIP lokunikezwa kwezakhiwo ezithile (isb. Ukwehla kwentengo)
Amathiphu nezeluleko zesifunda sendawo
Izimemezelo zempahla entsha
Beka amafomu akho njengama-popups wezinkinobho, ama-slide-ins, noma uwafake enyaweni yekhasi ngalinye.
Kunoma ikuphi, hlala ugxile enhlosweni yakho eyinhloko: ukuqoqa imininingwane kumakhasimende angaba khona. Gwema imincintiswano engacacile ngokweqile noma ukukhushulwa okungahlobene nomkhiqizo owuthengisayo, ngaphandle kwalokho, ungakhuthaza izivakashi ezingafaneleki ukuthi zibhalise. Inselelo yokubamba abathengi abangaba khona ngenkathi ubandlulula izivakashi ezingenantshisekelo kuzakhiwo zakho.
Amakhasi Okufika Okulandelwayo
Uma utshala imali emizamweni yokukhangisa neyokumaketha, ungenzi iphutha lokuqondisa wonke umgwaqo wakho ekhasini lasekhaya lesayithi lakho. Dala amakhasi athile okufika entweni ngayinye - noma ngabe yisikhangiso sephephandaba lendawo, ibhodi lokukhangisa, noma umyalezo we-imeyili. Ngokwakha nokwenza ngezifiso i- ikhasi lokufika ngakunye noma isiteshi ngasinye, hhayi kuphela lapho uzokwazi ukulandelela ukusebenza kokumaketha kwakho, futhi ungenza ngezifiso imiyalezo lapho.
Ikhasi ngalinye lokufika kufanele libe nomgomo owodwa kuphela. Umsebenzisi ofika kuleli khasi kumele akwazi ukuqonda okunikezayo kumasekhondi ambalwa futhi akubone kujabulisa ngokwanele ukugcwalisa ifomu ngolwazi lakhe siqu.
Nawa amanye amathuba amahle wamakhasi okufika:
Kumenyezelwa isakhiwo esisha sendawo
Usuku lwendlu oluvulekile noma ukubhuka kohambo oluyimfihlo
Ukulanda umhlahlandlela wokuthenga ekhaya
Uhlu lwemibuzo oluzosiza ekuthengeni indlu
Ukunikezwa kwephromoshini kumayunithi athile we-condo
Ithiphu 7: Idizayini Yamadivayisi Eselula Kuqala
Ngenkathi ideskithophu inikezela ngethoni ye-real estate (i-pun ehloselwe) ukukhombisa imininingwane kahle, ukwakha ulwazi lomsebenzisi kudivayisi ephathekayo enembile futhi elula kungaba yinselele. Noma ngabe kuthuthukiswa ikhasi lokusesha eliyinkimbinkimbi noma ukuvakasha kwempahla ethengiswayo lapho abasebenzisi bangakwazi khona ukuthwebula ngezithombe zempahla, ukwakheka kwamaselula kuzobaluleke kakhulu kumthelela wedizayini yakho yewebhusayithi.
Chitha isikhathi usebenzisa isayithi lakho kudivayisi ephathekayo bese ucela impendulo kubangani nakosebenza nabo ngokuthi isayithi lakho lisetshenziswa kalula kangakanani. Uzophinde ufune ukuhlukanisa usesho lwakho lweselula, ukugeleza kwezivakashi, bese wenza idatha etholakala ngokuvakashelwa kwamaselula ukuqinisekisa ukuthi iyasebenziseka futhi iyathandeka.
Uma udizayinela iselula kuqala, ungamangali lapho ubona ukweqa ekubukekeni kwenjini yakho yokusesha futhi nenani labathengi liyanda! Iselula ibaluleke kakhulu kuwo wonke amawebhusayithi embonini yezezakhiwo!
Ithiphu 8: Qala i-Real Estate Blog
I-blog yithuba elihle lokuzibandakanya nabathengi bakho. Ukwabelana ngezindaba zomuntu siqu, amathiphu okuthenga ekhaya, amabhizinisi wesifunda owathandayo, ukuvuleka okusha kwezindawo zokudlela, isikole, nemininingwane yentela yendawo… konke kwakha igunya lakho nobudlelwano nababhalisile bakho. Ngenkathi kungenzeka ukuthi awukaze uhlangane nabo, i-blog ibanikeza ithuba lokuthi bakwazi njengomholi abangabethemba emphakathini owuthengisayo.
Ngaphandle kokuthengisa, indima yakho njengomeluleki ibalulekile ebudlelwaneni bebhizinisi obukhulayo namakhasimende akho. Ukuthenga indawo kuyinto ebalulekile, ngakho-ke igunya lokwakha njenge-ejenti yezindlu isivakashi sakho esingasithemba kubaluleke kakhulu.
Ukugcina ibhulogi kuyindlela enhle yokugcina iklayenti futhi. Uma unikeza iseluleko ngobunikazi bekhaya, ukunakekelwa, ukulungiswa kabusha, nokukhulisa inani lempahla yabo - umthengi uzokugcina engqondweni uma bethuthwa futhi badinga ukuthengisa, noma umndeni wabo uyashintsha futhi badinga ukungena impahla efanelekayo.
Izihloko ongazisebenzisa kubhulogi yakho azipheli. Nazi izibonelo ezimbalwa:
Ukuthenga indlu (imibandela, ukukhetha, ukukhetha, imali)
Ukwehla kwamandla emakethe yezezakhiwo
Amakhambi asemthethweni (amadokhumende asemthethweni, iziqinisekiso, ukukhubazeka okufihliwe)
Izindawo zokuhlala zosaziwayo
Iseluleko sonyaka (izingadi, ukunakekelwa, njll.)
Ithiphu 9: Qala Iphephandaba
Sixoxe ngeminye imibono yokubhaliselwa ngenhla ngamafomu wakho wokuthwebula okuholayo, kepha ukubaluleka kwencwadi yezindaba akunakubukelwa phansi. Cabanga incwadi yakho yezindaba njengendlela yokuphusha iwebhusayithi yakho kumthengi noma kumakhasimende akho… ukubanikeza izeluleko ezibalulekile, izinsizakusebenza zesifunda, nokuqhubeka nokwakha ukuthembeka nokwethembana nabo. Uma kungumthengi, bangagcina bathole impahla abebeyifuna. Uma kuyiklayenti, uzoqhubeka nokugcina ubudlelwano nabo ngakho-ke uma sebelungele ukuthengisa, uzoba yi-ejenti ephezulu engqondweni!
Inothi eliseceleni: Iphepha lezindaba akumele libe umthwalo! Amawebhusayithi anamuhla anokuphakelwa kokuthengiswa okungafomethwa ngokuzenzekelayo, kuhlelwe, futhi kushicilelwe kungxenyekazi ye-imeyili ngaphandle kokuthi udinge ukuthinta inkinobho! Khuluma nethimba lakho lokuklama iwebhu ukuthi ungayifaka kanjani i-RSS kuma-imeyili amakhono.
Ithiphu 10: Thuthukisa iSayithi lakho ne-Newsletter… Yonke indawo!
Faka i-URL yesayithi lakho kuwo wonke amakhadi ebhizinisi, iflaya, idokhumenti, isiginesha ye-imeyili, ukusayina, nanoma yini enye oyenzayo. Abathengi banamuhla bathanda ukuzisebenzela futhi basebenzise iwebhu ukucwaninga nokwenza izinqumo zokuthenga. Uma uhlangana nabathengi, abathengisi, ochwepheshe bezezimboni, kanye nabaninimabhizinisi bezifunda emphakathini, buza ukuthi ungababhalisela yini incwadi yakho yezindaba. Ungamangala ngenani lokudluliselwa kanye nokwabelana okuzokhiqizwa okuqukethwe kwakho ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zomfutho.
Ngalezi zeluleko, uhlonyiswe kahle ukukhulisa umthelela wephrojekthi yezezakhiwo kuwebhu!
Tags: ingcebo yeselulaizinkambo ezihambayoukuthengisa izindluamakhasi okufika kwempahlaukumakethwa kwezindluingcebo mobileincwadi yezindaba ezithengisa izindluisiza sendawoukwakhiwa kwesiza sendawoiwebhusayithi ye-real estate
USumiya ngumbhali wale webhusayithi Xploited Media. Njengombhali wokuqukethwe, uSumiya uzame izindlela eziningi zokwakhiwa kwamawebhusayithi futhi unethemba lokuwabelana nabafundi bakhe.